DEAO waxay kubilaabtay 16-kii Automechanika Shanghai
Shirkadeena waxay 16-ka Automechanika Shanghai ku qaban doontaa Xarunta Carwada iyo Shirarka Qaranka (Shanghai) laga bilaabo Diseembar 02 ilaa 05, 2020
Aad baad ugu mahadsan tihiin taageerada joogtada ah ee aad siisaan shirkadeena,
Munaasabaddan awgeed, Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. waxay jeclaan lahayd inay kuu fidiso martiqaad qalbi furan oo aan idinku soo dhawaynno booqashadaada.
Dadka ka shaqeeya arrimaha warshadaha ee aan awoodin inay booqdaan goobta sababo la xiriira xayiraadaha safarka ayaa ka qayb qaadan kara dhacdadan warshadaha gawaarida adduunka iyada oo loo marayo barnaamijka tooska ah ee 'AMS Live', kaas oo furnaan doona laga bilaabo Nofeembar 30 illaa Diseembar 6. Barnaamijka AMS Live wuxuu siin doonaa beddel ku habboon dad badan dhagaystayaasha dibedda oo aan tagi karin goobta.
16aad Automechanika Shanghai waxaa la filayaa inuu soo jiito ku dhowaad 3,900 oo bandhigyaal ah oo ka socda dhammaan silsiladda warshadaha baabuurta, iyada oo guud ahaan aagga bandhigga uu yahay 280,000 mitir murabac. Bandhigani wuxuu si buuxda diiradda u saari doonaa hal-ku-dhigga "Dhisidda Nidaamka Nidaamka Gawaarida Gawaarida ee Mustaqbalka", tayaynta iyo casriyeynta toddobada waaxood ee waaweyn iyo saddex aagag gaar ah, iyo kor u qaadista is-dhexgalka ilaha warshadaha iyo horumarinta xudduudaha xuduudaha ee teknoolojiyada casriga ah.
Waqtigan xaadirka ah, Automechanika Shanghai waa bandhigga ugu weyn uguna ballaadhan ee ka dambeeya baabuurta ka dib bandhigyo badan oo Aasiya ah. Waa bandhig aad u soosocod leh, oo u horseedaya warshadaha gawaarida ee gudaha iyo dibaddaba mustaqbalka horumarka tikniyoolajiyadda cusub. Waxay daboolaysaa adeegyada suuqyada kaladuwan ee gawaarida ugu kala duwan, waxaana ku jira macluumaad badan oo suuq ah.
Bandhig caalami ah, Automechanika Shanghai wuxuu na siinayaa hab aad u faa'iido badan oo aan ku sahmin karno suuqyada soo koraya isla markaana xiriir dhow ula sameyno macaamiisha.
Markan waxaan sidoo kale keenay alaabtii iibka ee ugu weyneyd TPE sariiraha baabuurta iyo qalabyada kale ee gawaarida, anagoo rajeynayna inaan balaarino suuqa iibka, isla mar ahaantaana la xiriirno inbadan oo ka mid ah macaamiisheenna suuqa aan wali la furin Tani waxay leedahay door hagis wanaagsan oo loogu talagalay horumarka soo socda ee shirkadeena, si aan u fahamno rajada suuqa iyo fursadaha.
Hadda suuqa baabuurta ayaa keenay isbeddel hal-qarni ah. Markaan kaqaybqaadano Automechanika Shanghai, waxaan sifiican ula kulmi karnaa caqabadaha isla markaana fahmi karnaa jihada horumarka mustaqbalka ee suuqa.